Banyere Anyị - Kinrom Industries
Iyuzucha mgbanwe anwụrụ
Oil & Water anwụrụ
R & D n'etiti na
Kinrom ọrụ e guzobere 1983, n'ịchọpụta na nke atọ kasị ukwuu na ọdụ ụgbọ mmiri city-- Ningbo, China. For more than thirty years, the company has been dedicating itself to provide metal tube and pipe solution for auto engine and emission system, and other pipe and tube application in Automobile Industries.
Anyị nwere atọ osisi na-arụ ọrụ, na otu onye nkwakọba na South Korea, abụọ ọrụ itieutom ke Europe na na India. The ụlọ ọrụ nwere a ngụkọta rụpụta ebe 61500 square mita, na 500 ọrụ, gụnyere 30 engineer, na-arụ ọrụ ọnụ. E nwere 7 mmepụta edoghi maka iyuzucha mgbanwe ọjà, 5 n'ihi na EGR ọjà, 4 n'ihi na hydro akpụ akụkụ na 3 n'ihi na ọdụ anwụrụ, na-eru a ike nke 7 nde iberibe kwa afo. An na-ụlọ laabu center a na-eji nwalee ihe onwunwe, ngwaahịa na ya ịrụ ọrụ iji hụ na àgwà.
Na ihe siri ike management, technology na mmepụta àgwà, Kinrom gafere TS 16949 na 2006, ma na-gbaara site ISO 14001 na ISO 18001 na 2013. The ụlọ ọrụ bụ ugbu a ike iji na-enye ma OEM na ODM ọrụ n'ihi na zuru ụwa ọnụ ahịa.
Anyị nwere mba ahịa otu inye anyị ahịa na oge servings niile gburugburu ụwa. Nzube anyị bụ inye mma na ngwaahịa, na ike ndụ ka mma.
Okwu: Ọ dịghị. 528 yuanbaoshan ụzọ beilun Ningbo Zhejiang China